Mmehie dị iche iche na àjà a na-achụ maka nke ọ bụla (1-6)
Ikwupụta mmehie ndị ọzọ mere (1)
Ihe ndị ogbenye nwere ike iweta ka e jiri chụọrọ ha àjà (7-13)
Ihe onye mehiere n’amaghị ụma ga-eweta (14-19)
5 “‘Ọ bụrụ na mmadụ* hụrụ mgbe onye ọzọ mere mmehie ma ọ bụ nụ gbasara mmehie ahụ ma ọ bụ mara gbasara ya, ya anụkwa mgbe e kwuru n’ihu ọha na onye ma gbasara mmehie ahụ kwesịrị ikwu ya,*+ ma ọ pụtaghị kwuo ya, o mehiela. Ọ ga-aza ajụjụ maka mmehie ya. 2 “‘Ma ọ bụkwanụ, ọ bụrụ na mmadụ* metụrụ ihe ọ bụla na-adịghị ọcha aka, ma ọ̀ bụ ozu anụ ọhịa na-adịghị ọcha ma ọ̀ bụ ozu anụ ụlọ na-adịghị ọcha ma ọ̀ bụ ozu obere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ* na-adịghị ọcha,+ onye ahụ bụzi onye na-adịghị ọcha, ikpe makwara ya, ọ bụrụgodị na ọ maghị na ya adịghị ọcha. 3 Ma ọ bụkwanụ, ọ bụrụ na mmadụ amaghị ụma metụ ihe ọ bụla nwere ike ime ka mmadụ ghara ịdị ọcha aka,+ ya bụ, onye ọ bụla na-adịghị ọcha ma ọ bụ ihe ọ bụla na-adịghị ọcha nke nwere ike ime ka ọ ghara ịdị ọcha, o wee mechaa mata gbasara ya, ikpe amala ya. 4 “‘Ma ọ bụkwanụ, ọ bụrụ na mmadụ* echeghị echiche nke ọma ṅụọ iyi na e nwere ihe ọ ga-eme, ma ọ̀ bụ ime ihe ọma ma ọ̀ bụ ime ihe ọjọọ, ma ya emechaa chọpụta na ya echeghị echiche nke ọma ṅụọ iyi ahụ, ikpe mara ya.*+ 5 “‘Ọ bụrụ na ikpe mara ya na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a, ọ ga-ekwupụta+ otú o si mehie. 6 Ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya maka mmehie o mere,+ ya bụ, obere nne atụrụ ma ọ bụ obere nne ewu, ka ọ bụrụ àjà mmehie. Onye nchụàjà ga-ekpuchiziri ya mmehie ya. 7 “‘Ma ọ bụrụ na ọ gaghị ewetali atụrụ, ọ ga-ewetara Jehova nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ+ ka ha bụrụ àjà ikpe ọmụma maka mmehie ya. Otu ga-abụ maka àjà mmehie, otu abụrụ maka àjà a na-esu ọkụ.+ 8 Ọ ga-ewetara ha onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ebu ụzọ were nke a ga-eji chụọ àjà mmehie. Ọ ga-esi n’ihu olu ya tụbie ya olu, ma isi ya agaghị adapụ adapụ. 9 Ọ ga-efesatụ ọbara nnụnụ àjà mmehie a n’akụkụ ebe ịchụàjà, ma ọ ga-ahapụ nnụnụ a ka ọbara ya fọrọ afọ gụsịa n’ala ebe ịchụàjà.+ Ọ bụ àjà mmehie. 10 Ọ ga-eji nnụnụ nke ọzọ chụọ àjà a na-esu ọkụ otú e nyere iwu ka e si na-achụ ya.+ Onye nchụàjà ga-ekpuchiri ya mmehie o mere, a ga-agbagharakwa ya.+ 11 “‘Ma ọ bụrụ na ọ gaghị ewetali nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ, ọ ga-eweta otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa*+ ntụ ọka e gwere nke ọma ka ọ bụrụ àjà mmehie maka mmehie ya. Ọ gaghị awụ mmanụ n’elu ya ma ọ bụ tụkwasị frankinsens n’elu ya n’ihi na ọ bụ àjà mmehie. 12 Ọ ga-ewetara ya onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ekporo ntụ ọka ga-eju ọbụ aka ya ka ọ bụrụ ihe nọchiri anya àjà o wetara, ọ ga-esukwa ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà, n’elu àjà Jehova e suru ọkụ. Ọ bụ àjà mmehie. 13 Onye nchụàjà ga-ekpuchiri ya mmehie o mere, ya bụ, nke ọ bụla n’ime mmehie ndị a. A ga-agbagharakwa ya.+ Ihe fọrọ n’àjà a ga-abụ nke onye nchụàjà,+ otú a na-eme ihe fọrọ n’àjà ọka.’”+ 14 Jehova gwakwara Mosis, sị: 15 “Ọ bụrụ na mmadụ* emehie n’amaghị ụma wee mebie iwu e nyere gbasara ihe ndị dị nsọ bụ́ nke Jehova,+ ọ ga-esi n’ìgwè atụrụ wetara Jehova ebule ahụ́ dị mma ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma.+ Onye nchụàjà ga-ekwu shekel* ọlaọcha ole ebule ahụ ruru, ma e jiri shekel dị n’ebe nsọ* tụọ ọlaọcha ahụ.+ 16 Ọ ga-akwụ ụgwọ maka imebi iwu e nyere gbasara ebe nsọ. Ọ ga-ewetakwa otu ụzọ n’ụzọ ise nke ụgwọ ọ kwụrụ.+ Ọ ga-enye ya onye nchụàjà ka onye nchụàjà jiri ebule ahụ e ji achụ àjà ikpe ọmụma kpuchiere ya mmehie ya.+ A ga-agbagharakwa ya.+ 17 “Ọ bụrụ na mmadụ* emehie wee mee nke ọ bụla n’ime ihe ndị Jehova nyere iwu ka a ghara ime, ọ bụrụgodị na ọ maghị na ya mehiere, ikpe mara ya. Ọ ga-azakwa ajụjụ maka mmehie ya.+ 18 Ọ ga-esi n’ìgwè atụrụ wetara onye nchụàjà ebule ahụ́ dị mma nke ruru ego ole a chọrọ ka anụ àjà ikpe ọmụma ruo.+ Onye nchụàjà ga-ekpuchiziri ya mmehie o mere n’amaghị ụma. A ga-agbagharakwa ya. 19 Ọ bụ àjà ikpe ọmụma. Ikpe mara ya maka na o mehiere Jehova.”
^ Na Hibru, “ya anụkwa ọnụ a bụrụ.” O nwere ike ịbụ ọkwa a mara gbasara ihe ọjọọ mmadụ mere nakwa ọnụ a bụrụ onye mere ihe ọjọọ ahụ ma ọ bụ onye ma gbasara ya ma jụ ịgba akaebe.
^ Ọ ga-abụ na ihe a na-ekwu bụ na o mezughị nkwa o kwere.